justfreeman: juli 2011
Posted by justfreeman at 14:080comments
Posted by justfreeman at 13:580comments
ဧရာဝတီ Thursday, 28 July 2011 12:00
.လာဘ်ပေးလာဘ်ယူနှင့်အာဏာအလွဲသုံးစားမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဆိုသောထိပ်တန်းစစ်ဗိုလ်ချုပ်၅ဦးကို ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကစုံစမ်းခေါ်ယူစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ်လျက်ရှိကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါ၅ဦးမှာလက်ရှိစစ်တပ်တွင်တပ်မတော်စစ်ရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဖြိုး (DSA–၂၂)၊ မြန်မာ့စီးပွားရေးဦးပိုင်လီမိတက်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်စစ်ရေးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ခင်ဇော်ဦး (OTS-၅၆)၊ကစထမှူးဗိုလ်ချုပ်မြင့်စိုး(OTS-၆၀)၊တြိဂံဒေသတိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်သန်းထွန်းဦး(DSA-၂၄)၊ ကမ်းရိုးတန်းတိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ခင်မောင်ဌေး(OTS-၆၃)တို့ ပါဝင်ကြောင်း စစ်ဘက်အသိုင်းအ၀န်းမှ သတင်းရရှိသည်။
“ဗိုလ်ချုပ်ကျော်ဖြိုးဆိုရင်အရင်တြိဂံဒေသတိုင်းမှူးလုပ်ခဲ့တယ်။လက်ရှိတိုင်းမှူးရော၊အရင်တိုင်းမှူးရောခေါ်အစစ် ခံရတာ။ ဗိုလ်ချုပ်မြင့်စိုး ဆိုရင်လည်း အရင်တုန်းက စစ်ကိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူးလုပ်တုန်းက မုံရွာဘက်က မြေကွက်တွေ ရောင်းစားခဲ့ တာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါတွေ အခု စစ်ကိုင်းတိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဦးသာအေး (ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း)ကသမ္မတဦးသိန်းစိန်ဆီတိုင်တယ်။ကမ်းရိုးတန်းတိုင်းမှူးလုပ်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ခင် ဇော်ဦးနဲ့လက်ရှိတိုင်းမှူးရောအဲဒီလို အတိုင်ခံရတာလို့ ကြားတယ်”ဟုနေပြည်တော် စစ်ဘက်အသိုင်းအ၀န်းနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ပြောသည်။
“အတိုင်ခံရတာဆိုပေမယ့်လက်ဆုပ်လက်ကိုင်သက်သေနဲ့တကွအပြစ်ကျူးလွန်ခဲ့တာမပြနိုင်ရင်တော့ ရာထူး ကအနားပေးခံရတာတို့၊နုတ်ထွက်ခိုင်းတာတို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။သက်သေမပြနိုင်ရင်တော့ သတိပေးတဲ့အဆင့်နဲ့ပဲ ပြီးသွားမယ်” ဟု အဆိုပါနီးစပ်သူက ဆိုသည်။
ယခုလအတွင်းရာထူးမှအနားပေးခြင်းခံလိုက်ရသောဗိုလ်ချုပ်တင်ငွေသည်မန္တလေးမြို့ရှိ သိန်းထောင်သောင်းချီ တန်သောမြေကွက် အရောင်းအ၀ယ်များပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိမန္တလေးတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ဦးရဲမြင့်(ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း)ကသမ္မတနှင့်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထံ တိုက်ရိုက်တိုင်ကြားခဲ့ကြောင်း၊ယင်းနောက်သက်သေသာဓကနှင့်တကွအာဏာ အလွဲသုံးစားပြု မြေကွက်ရောင်းစားခဲ့သည်ကို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသည့်အတွက် ရာထူးမှ အနားပေးခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းတိုင်းမှူးဗိုလ်မှူးချုပ်ထွန်းသန်းသည်လည်းဇွန်လတွင်ရာထူးမှအနားပေးခံလိုက်ရပြီး အစိုးရသစ်တက်ပြီး ပထမဦးဆုံး ရာထူးမှ အနားပေးခြင်းခံလိုက်ရသောထိပ်တန်း စစ်တပ် အဆင့်မြင့်အရာရှိ တဦးဖြစ်ခဲ့သည်။
“ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဖြစ်လာပြီဆိုတာနဲ့ဦးစီးချုပ်ကသူယုံကြည်တဲ့၊ စိတ်ချရတဲ့ သူတွေကို ဆွဲတင်ချင်တော့ ရှေ့မှာ ရှိနေတဲ့သူတွေကို လာဘ်ပေးလာဘ်ယူ အကြောင်းပြပြီး ဖြုတ်ထုတ်တာတွေ လုပ်တယ်။ သူ့အာဏာ တည်ဆောက်တာပေါ့။ဒါကတပ်မတော်မှာအစဉ်အလာလိုဖြစ်နေပြီ”ဟုနေပြည်တော် စစ်တပ်အသိုင်းအဝန်းနှင့် နီးစပ်သူတဦးက ဆိုသည်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည်တပ်တွင်းအခြေအနေများ၊ရာထူးအပြောင်းအလဲလုပ်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီးဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေထံတိုက်ရိုက်တင်ပြ၍ညွှန်ကြားမှုခံယူသည်ဟု စစ်ဘက်သတင်းရပ်ကွက်များ၏ အဆိုအရ သိရသည်။
Posted by justfreeman at 13:360comments
ကိုပေါက် ကြာသပတေးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၈ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၆ နာရီ ၅၂ မိနစ် .
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်းအစိုးရနှင့်ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်များအကြားတိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားနေရခြင်းမှာအာဏာပိုင်များကဒေသခံများ၏လယ်မြေမတရားသိမ်းပိုက်မှုများကြောင့်သာ ဖြစ်နိုင်ကြောင်း ရှမ်းတိုင်းရင်းသားသား ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ SNDP မှ ဦးစောယွန်းပိုင်က ပြောသည်။
“မကျေနပ်မှုတွေကတော့ရှိနေကြမှာပဲလေ။အဲဒီကနေပေါက်ကွဲတာပေါ့။နယ်မြေအသိမ်းခံရတယ်ဆို တော့လည်းဘယ်သူကျေနပ်မလဲဗျာ။ပိုင်ရှင်ကတောဘက်ကအဖွဲ့အစည်းတွေကိုသွားတိုင်မှာပေါ့ဗျာ။ ရန်ငြိုးရန်စကတော့အဲဒီကစတာဖြစ်မှာပါ။အလကားနေရင်းသက်သက်တော့ဒီကိစ္စ မဖြစ်ပါဘူးဗျ။ အဲတော့ ကြုံရင်ကြုံသလို ချကြတာပေါ့” SNDP တောင်ပိုင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးစောယွန်းပိုင်က ပြောသည်။
၂ဝ၁ဝရွေးကောက်ပွဲပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း မတရားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက SNDP ပါတီအား တိုင်ကြားနိုင်ကြောင်း မြို့နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များမှတဆင့် ဆောင်ရွက်လာခဲ့ရာ မိုင်းကိုင်၊ ကျေးသီး၊ နမ့်ဆန်နှင့် ခိုလမ်မြို့နယ်များမှ တိုင်ကြားစာများအား စီစစ်လက်ခံရရှိထားသည်။
တိုင်ကြားစာအများစုမှာအစိုးရတပ်မှလယ်မြေများမတရားသိမ်းပိုက်ထားမှုများဖြစ်ကြောင်း ဦးစောယွန်းပိုင်က“ခိုလမ်ဘက်မှာမီးရထားလမ်းဖြတ်မှာမလွတ်လို့ဆိုပြီးလိုတာကနည်းနည်း သိမ်းလိုက်တာက အများကြီးပေါ့။ပေ၁ဝဝလောက်လိုတာကိုပေ၅ဝဝလောက်အလွန်အကျွံ သိမ်းပစ်တာပေါ့။ လယ်စိုက်တဲ့နေရာတွေကို လိုက်သိမ်းတာမျိုး ရှိတယ်” ဟု ဥပမာတခု ထုတ်ပြ ပြောဆိုသည်။
ကျေးသီးမြို့နယ်တွင် ကျောက်မီးသွေးတွင်း အတွက် လယ်တဧကလျှင် လျော်ကြေး ၂၄ဝ၁၈ ကျပ်ဖြင့် လယ်မြေများ သိမ်းယူမှုနှင့် နမ်ဆန်မြို့နယ်တွင်လည်း အလားတူ မြေသိမ်းမှုများ ဖြစ်ခဲ့ပြီး မိုင်းကိုင်မြို့နယ်မှ ထော်လာဂျီတစီးအား တပ်မှ ချောစွဲထားစဉ် တောထဲ၌ မီးလောင်ကျွမ်းပြီး ယာဉ်မောင်း သေဆုံးခဲ့ရမှု စသည့် မတရားမှုများအား စီစစ် လက်ခံ ရရှိထားကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါတိုင်ကြားစာများနှင့် ပတ်သက်၍ “တချို့ကိစ္စကို ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ တယ်ပြမယ်၊ တချို့ကိစ္စကျ
ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာတင်ပြမယ်၊တချို့ကိုILOနဲ့ညှိနှိုင်းမယ်။တချို့ကိစ္စလေးတွေNGOနဲ့ ညှိနှိုင်းမယ်” ဟု SNDP ဘဏ္ဍာရေးမှူး ဦးစောသန်းမြင့်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အားလည်းတပါတည်းတိုင်ကြားခြင်း ဖြစ်သည်။ အနယ်နယ်မှ တိုင်ကြားမှုများ များပြားသော်လည်း ခိုင်လုံသည့် သက်သေ အထောက်အထား ရှိသည့် တိုင်ကြားစာများကိုသာ တောင်ကြီး SNDP ရုံးက လက်ခံထားကြောင်း သိရသည်။
၂ဝ၁ဝ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲဆန္ဒနယ် ၅၇ နေရာ အနိုင်ရရှိထားသောSNDPပါတီသည် ရှမ်းပြည်နယ် အစိုးရ
တွင်လည်း ဝန်ကြီး ၂ နေရာ ရရှိထားသည်။
ရှမ်းပြည်နယ်အတွင်း ဇူလိုင်လ ဒုတိယအပတ် အတွင်းမှ ပြန်လည် ဖြစ်ပွားနေသော တိုက်ပွဲများမှာ မြေယာများ အဓမ္မသိမ်းယူရာမှ ဖြစ်ပွားရသည့် အလျောက် နှစ်ရှည် အထိန်းသိမ်းခံနေရသော ဦးခွန်ထွန်းဦး၊ စဝ်ဆေထင်တို့ အပါအဝင် ရှမ်းခေါင်းဆောင်များ လွတ်မြောက်ရေးနှင့် မဆိုင်ကြောင်း ဦးစောယွန်းပိုင်က ပြောသည်။
“ရှမ်းခေါင်းဆောင်တွေလွှတ်ပေးလိုက်လို့အပစ်အခတ်တွေရပ်သွားမယ်ဆိုတာသိပ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဗျ။ခုတိုက် နေတာတွေကခွန်ထွန်းဦးတို့၊စဝ်ဆေထင်နဲ့သိပ်မဆိုင်ဘူးဗျ။သူတို့ကိုလွှတ်လိုက်လို့အပစ်အခတ်တွေ ရပ်သွားမယ်လို့ သိပ်မထင်ဘူးဗျ” ဟု သူက ပြောသည်။
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး၌ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးရေးအတွက် SNDPမှတင်ပြခဲ့ပြီးမကြာမီ‘လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်’ဖြင့် တနှစ် လျှော့ချလာသော်လည်း နောက်ထပ် ထူးခြားမှု မရှိခဲ့ကြောင်း ဦးစောယွန်းပိုင်က ပြောသည်။
ဒုတိယအကြိမ်ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် အစည်းအဝေးများကို စက်တင်္ဘာလတွင် ပြန်လည် ကျင်းပနိုင်ဖွယ်
ရှိသည်ဟု ယူဆရကြောင်း ဦးစောသန်းမြင့်က ပြောသည်။
SNLD ပါတီအာဘော် အပတ်စဉ် ဂျာနယ်ကို မြန်မာ-ရှမ်း နှစ်ဘာသာဖြင့် ဇူလိုင်လတွင် စတင်ထုတ်ဝေရန် စီစဉ်ထားသော်လည်း ပါတီအကြောင်းမှ လွဲ၍ အခြားအကြောင်းအရာများ မဖော်ပြရဟု စာပေစီစစ်ရေးမှ ဆိုသဖြင့် မထုတ်ဝေနိုင်သေးကြောင်းလည်း ကြားသိရသည်။
Posted by justfreeman at 13:190comments
လင်းသန့် Wednesday, 27 July 2011 19:26
.ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်မြန်မာအစိုးရသစ်ဝန်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့၏ ဆွေးနွေးပွဲအပြီး နှစ်ဘက်စလုံးက အကောင်းမြင်ကြောင်းနှင့်ဆွေးနွေးပွဲကိုကျေနပ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သော်လည်းအစိုးရသစ်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အကြား ကွာဟချက် ကြီးမားနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နောက်ဆုံးဆွေးနွေးပွဲနှင့်နီးစပ်သည့်အသိုင်းအ၀န်းမှရရှိသောသတင်းများအရ ဆွေးနွေးပွဲတွင် အစိုးရ၀န်ကြီး ဦးအောင်ကြည်ကအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD)ပါတီတရားဝင်ရပ်တည်ရေးအတွက်ပြန်လည် မှတ်ပုံတင်ရေးအပါအ၀င်လူမှုရေးလုပ်မည်ဆိုပါကပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်လူမှုရေးအသင်းအဖြစ် မှတ်ပုံတင်ရန် ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်အား ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနကNLDဥက္ကဋ္ဌနှင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး တို့ထံသို့ အကြောင်း ကြားစာ ပို့ထားကြောင်း ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် သတင်းစာများတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ဦးအောင်ကြည်က ထပ်မံကမ်းလှမ်းရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကNLDပါတီသည် တရားဝင်ပါတီ တရပ်အဖြစ် တည်ရှိကြောင်း၊ တရားဝင်မှုဆိုင်ရာ မတူကွဲလွဲမှုများကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးလိုကြောင်း ပြန်ပြောသည်ဟု ဆွေးနွေးပွဲနှင့် နီးစပ်သည့် အသိုင်းအဝန်းက ဆိုသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဘက်ကလည်းNLDပါတီသည်တရားဝင်ပါတီဖြစ်ပြီးတရားဝင်မှုဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားမှုများကို ဆွေးနွေးကြရန်အကြောင်းပြန်စာပေးပို့ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ထို့အပြင်NLDပါတီတရားဝင်မှုဆိုင်ရာ မတူကွဲပြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ တရားရုံးအဆင့်ဆင့်သို့ တင်ပြတောင်းခံခဲ့သော်လည်း နောက်ထပ် ဥပဒေကြောင်းအရ ဆက်လက်တင်ပြရန် အဆင့် မရှိတော့ပေ။
သို့အတွက်NLDကပါတီ တရားဝင်ရပ်တည်ရေးကိစ္စကို ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီသို့ မကြာမီ တင်ပြသွားရန် ရှိကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
“NLDပါတီတရားဝင်ရေး ကိစ္စက တရားရုံး အဆင့်ဆင့်တက်ခဲ့တာ ဒီပြည်တွင်းမှာ ဥပဒေကြောင်း အရတော့ အဆင့်ကုန်ပြီ။ဒါကြောင့်လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီကိုမကြာခင်တင်ပြဖို့ရှိတယ်”ဟုNLDပါတီ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်ဦးက ပြောသည်။
NLD ပါတီသည် ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ် အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ကိုင်ဆွဲပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအား လက်မခံခဲ့ပေ။ ထို့ကြောင့် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်း သပိတ်မှောက်ခဲ့ပြီး ပါတီ အနေဖြင့် ထပ်မံ မှတ်ပုံတင်စရာ မလိုသည့်အတွက် မှတ်ပုံမတင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း တရားဝင်ကြေညာချက် ထုတ်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် နိုဝင်ဘာလ တွင်ကျင်းပခဲ့သော ရွေးကောက်ပွဲကို စစ်အစိုးရက ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး စစ်အစိုးရ ကျောထောက် နောက်ခံ ပေးထားသည့် ပြည်ထောင်စု ကြံ့ ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (ကြံ့ဖွံ့ပါတီ) က အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ရွေးကောက်ပွဲသည် လွတ်လပ်၍ တရားမျှတမှုမရှိဘဲ မဲမသမာမှု များစွာရှိကြောင်း NLD က ပြောဆိုခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး ရက်ပိုင်းအကြာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာအစိုးရတို့ကြား ယခုကဲ့သို့ ကွာဟမှုများ ရှိသော်လည်း မကြာသေးမီက မိသားစု ပုဂံ ဘုရားဖူး ခရီးစဉ်တွင် အစိုးရကို ကြိုတင် အကြောင်းကြားခဲ့ခြင်း၊ ခရီးစဉ်အတွင်း မည်သည့် နိုင်ငံရေးလှုံ့ဆော်မှုမျိုးမှ မပြုလုပ်ခြင်း စသည်ဖြင့် အစိုးရ ယုံကြည်မှုရစေရန် ပြသခဲ့သည်။
အလားတူအာဇာနည်နေ့ကလည်းအစိုးရဘက်ကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုကိုလက်ခံတက်ရောက်ပြီး ဒီမိုကရေစီ အင်အားစုများနှင့်အတူ အာဇာနည်ကြီးများအားသွားရောက်ဂါရ၀ပြုရာတွင် မလိုလားအပ်သည့် ပဋိပက္ခများ မရှိဘဲ ထိမ်းသိမ်းမှုများနှင့် နှစ်ဘက်ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။
အာဇာနည်နေ့တွင်ချောမွေ့ခဲ့ခြင်းသည်နှစ်ဦးနှစ်ဘက်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှု၏အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု ဖြစ်ကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်း စုကြည်က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ၀န်ကြီးဌာနတို့၏၀န်ကြီးဦးအောင်ကြည်တို့၏ တနင်္လာနေ့က ဆွေးနွေးပွဲအပြီးတွင် သတင်းထောက်များကမေးမြန်းရာဦးအောင်ကြည်က ယခင်တွေ့ဆုံမှုများနှင့် နှိုင်းယှဉ်၍ယခုတွေ့ဆုံမှုသည်ယခင်ရလဒ်များထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်ရလဒ်ဖြစ်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းနှင့်နှစ်ဘက်စလုံးကဆွေးနွေးပွဲများဆက်လုပ်ရန်အတွက်သဘောတူခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ဖြေကြားသည်။
“ဒီဥစ္စာကကျနော်တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကိစ္စတွေ၊ ရှေ့လျှောက်လုပ်သွားစရာ ကိစ္စတွေက အများကြီးရဲ့ အစ ခြေလှမ်း တခုလို့ ပြောမယ်ဆိုရင် ပြောနိုင်ပါတယ်”ဟု ဦးအောင်ကြည်က ပြောခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဆွေးနွေးပွဲတွင်“တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး၊စိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုပပျောက်ရေး၊အများပြည်သူ အကျိုးဖြစ်ထွန်းရေး”ကိစ္စများအား ပြောဆိုခဲ့သည်ဟုပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ကာ ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်းတိုင်းပြည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည့် ရလဒ်များကိုသာ မျှော်လင့် ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။
“ဘာပဲလုပ်လုပ်၊ဘာစကားပဲပြောပြော၊ဘယ်သူနဲ့ပဲတွဲတွဲ၊ကျမတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့နိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည် အတွက်ပြည်သူပြည်သားတွေကိုအကျိုးပြုဖို့ပါပဲ။ဒါကိုပဲကျမတို့မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဆိုခဲ့သည်။
ယခင်ကနှင့်မတူဘဲပူးတွဲသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲလုပ်ဆောင်ပြီးဆက်လက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရန် သဘောတူခဲ့မှုများအား နှစ်ဘက်စလုံးက ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းကြောင့်NLDပါတီအနေဖြင့် အကောင်းဘက်က ရှုမြင်ကာ ဆက်လက် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှုများမှ တဆင့် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှ လူမှုဒုက္ခများ အမြန်ဆုံး ကင်းဝေးရေးကို မျှော်လင့်နေကြကြောင်း သိရသည်။
“ပြည်သူလူထုအတွက် ဒုက္ခသုက္ခတွေ၊ ဖြစ်ပျက်နေတာတွေ မြန်မြန်လွတ်မြောက်သွားအောင် ကြိုးစား လုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်သလို၊ဟိုဘက်ကလည်းဒီလိုဆန္ဒရှိတာ တူတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီဘက်ကလည်း ကောင်းအောင်လုပ်နေတာပဲ၊ဟိုဘက်ကလည်းကောင်းချင်တဲ့စေတနာရှိတယ်လို့ပြောတာပဲ”ဟု ဦးတင်ဦးက ဆိုသည်။
မျိုးသန့် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၇ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၄၄ မိနစ် .
ချင်းမိုင်(မဇ္ဈိမ)။ ။ပဲခူးတိုင်းအတွင်းရှိ“အောင်ဆန်းဂျာမွန်း”ဟုအမည်ပေးထားသောစာကြည့်တိုက်နှစ်ခုကို ဩဂုတ်လဒုတိယပတ်တွင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သွားရောက်ဖွင့်လှစ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်းအမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် NLD ၏ ပဲခူးမြို့နယ် စည်းရုံးရေး ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြတ်လှက ပြောသည်။
၁၉၉၇ခုနှစ်အတွင်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကချင်ပြည်နယ်သို့ခရီးထွက်စဉ်ကြားသိခဲ့ရသည့် ကချင် ဝေါဟာရတခုကိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှကြိုက်နှစ်သက်သည့်အတွက်စာကြည်တိုက်အမည်ကို အောင်ဆန်းဂျာမွန်းဟု ပေးဖြစ်ကြောင်းလည်း ဦးမြတ်လှက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
“ကချင်ပြည်နယ်ကိုရောက်တော့ကချင်မလေးတွေကအော်တယ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်ပဲခူးတိုင်းအ တွင်းရှိ “အောင်ဆန်းဂျာမွန်း ”ဟု အမည်ပေးထားသေစာကြည့်တိုက်နှစ်ခုကို သွားရောက် ဖွင့်လှစ်ပေးမည်
တဲ့။အောင်ဆန်းဂျာမွန်း၊ အောင်ဆန်းဂျာမွန်း ဆိုပြီးတော့ အော်တဲ့ အခါကျတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သိပ်ပြီးတော့ သဘောကျလာတယ်” ဟု ဦးမြတ်လှက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဂျိန်းဖော ကချင်ဘာသာစကားတွင် ဂျာမွန်းဆိုသည်မှာ ရွှေဝတ်မှုန်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး သမီးကြီးများကိုလည်း မျိုးရိုးအမည် နောက်တွင်တွဲ၍ တင်စား အမည်မှည့်ခေါ်လေ့ ရှိသည်။
ပဲခူးမြို့ပေါ်ရှိပန်းလှိုင်၂၃ လမ်းနှင့်သနပ်ပင်မြို့မင်းလမ်းတို့တွင်ဖွင့်လှစ်မည့်အောင်ဆန်းဂျာမွန်း စာကြည့်တိုက် များတွင် စာအုပ်ပေါင်း ၄,၀၀၀ ကျော်ရှိကြကာ ပဲခူးဒေသခံများမှ လှူဒါန်းသည့် စာအုပ်များ ဖြစ်သည်ဟု ဦးမြတ်လှကပြောသည်။စာကြည့်တိုက်တခုစီအတွက်ကုန်ကျစရိတ်မှာ ကျပ်ငွေ ၁ဝ သိန်းကျော် ဖြစ်သည်။
စာအုပ်များတွင် NLDဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင် ဦးဝင်းတင်ရေးသည့် “ဘာလဲဟဲ့ လူ့ငရဲ” ကဲ့သို့သော စာအုပ်အများ အပါအဝင် နိုင်ငံရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ဝတ္ထုစာအုပ်များလည်း စာကြည့်တိုက်တွင် ထားရှိမည် ဖြစ်သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ပဲခူးတိုင်းစာကြည့်တိုက်ဖွင့်ပွဲအတွင်းလုံခြုံရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဦးမြတ်လှမှ ဦးစီးကာ ပဲခူးတိုင်း NLD လူငယ်များမှ တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း ဦးမြတ်လှက ဆိုသည်။
“လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲခူးလူငယ်တွေနဲ့ကျနော်တို့ဒီမှာအကုန်လုံးစီစဉ်ထားပြီးပြီလုံခြုံရေးကသူတို့ဆီ ကလည်းပါလာမယ်ကျနော်တို့ဆီကလဲတထပ်ထပ်ဝိုင်းမယ်လုံခြုံရေးကလည်းကျနော်တို့အားလုံး စီစဉ်ထားပြီးပြီ ဘယ်တော့ လာမယ်ဆိုတာသာ မသိသေးတာ ” ဟု ဦးမြတ်လှက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည်၂ဝ၁ဝခုနှစ်နိုဝင်ဘာ၁၃ရက်နေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှလွတ်လာအပြီး နေအိမ်ပြင်ပခရီးစဉ်များအဖြစ်ယခုလ ၄ ရက်နေ့ကလည်းပုဂံရှေးဟောင်းမြို့တော်သို့၎ရက်ကြာမိသားစု ဘုရားဖူးခရီး သွားခဲ့သေးသည်။
ခရီးစဉ်၏ နောက်ဆုံးနေ့ ဖြစ်သည့် ဇူလိုင် ၇ ရက်နေ့ ညောင်ဦးဈေးသို့ သွားရောက်ရာတွင် ညောင်ဦး
ယခု ဒုတိယအကြိမ် ပဲခူးခရီးစဉ်တွင်လည်း ပဲခူးဒေသခံများမှ စိတ်ဝင်စားမှု များပြားကြောင်း ဦးမြတ်လှက မဇ္ဈိမကို ဆက်ပြောခဲ့သည်။
“အခုလည်းကျနော့်ကိုလာမလားလာမလားနဲ့ တော်တော်လာမေးနေကြတယ်ဗျ၊ စည်းရုံးရေး သဘောလည်း ပါမှာပေါ့ဗျာအခုတည်းကကျနော့်ကိုလာမေးနေကြတာအဲဒီနေ့လည်းဘယ်လောက်လာမလဲမှမသိတာ၊ အခုတည်းက သူတို့က ရွစိရွစိနဲ့ ဖြစ်နေကြပြီ” ဟု ဦးမြတ်လှက ဆိုသည်။
Posted by justfreeman at 16:260comments
စည်သူ Tuesday, 26 July 2011 19:14
.ရန်ကုန်မြို့ရှိမြို့ပတ်ရထားလုပ်ငန်းကိုပြည်တွင်းရှိပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းရှင်များအားလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးရေးအတွက် စိတ်ဝင်စားသည့်လုပ်ငန်းရှင်များကိုဖိတ်ခေါ်၍ဆွေးနွေးပွဲတရပ်ကိုနေပြည်တော်ရှိရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီးဌာနတွင် ယနေ့ ကျင်ပသွားသည်။
တကြိမ်တည်းခရီးသည်နှင့်ကုန်များစွာတင်ဆောင်နိုင်ပြီးဈေးနှုန်းချိုသာသော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာ အရှုံးပေါ်နေသည့်အပြင်ညံ့ဖျင်းသောဝန်ဆောင်မှု၊သန့်ရှင်းမှုမရှိခြင်းတို့ကြောင့်အဝေဖန်ခံနေရသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရထားပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ယနေ့အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားသည်။
“အဓိကကတော့အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးကလွှတ်တော်မှာရန်ကုန် မြို့ပတ်ရထားတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးတင်ပြလာလို့အခုလိုပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်ရေးဖြစ်သွားတာပါ”ဟုဝန်ကြီးက ဆိုသည်။
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ(ကြံ့ဖွံ့ပါတီ)မှကိုယ်စားလှယ်၁ ဦး၊ ဦးအောင်သောင်၏သား ဦးနေအောင်ပိုင်အိုင်ဂျီအီးလုပ်ငန်း၊ရွှေတောင်ဖွံ့ဖြိုးရေး စသည်တို့မှလုပ်ငန်းရှင်များအပါအ၀င် လုပ်ငန်းရှင်ပေါင်း၉၀ခန့်တက်ရောက်သည့်ယင်းအစည်းအဝေးတွင်တိကျသည့်ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်နိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိကြောင်း လုပ်ငန်းရှင်များက ပြောကြားသည်။
“အခုတကြိမ်ကဆွေးနွေးတယ်ဆိုရုံပါပဲ။နောက်တကြိမ်အစည်းအဝေး ထပ်ခေါ်ရင်တော့ ဒီထက်ပြတ်သားတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် တွေ ထွက်ပေါ်လာမယ် ထင်ပါတယ်” ဟု အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသည့် လုပ်ငန်းရှင် တဦးက ပြောကြားသည်။
ယင်းအစည်းအဝေးတွင် ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထား လုပ်ငန်းတခုလုံးအား ပုဂ္ဂလိကပိုင်လွှဲမည်လော၊ အပိုင်းလိုက် ခွဲကာ လွှဲမည် စသည်ဖြင့် မဆုံးဖြတ်နိုင်သကဲ့သို့ နှစ်မည်မျှကြာ ငှားရမ်းမည်၊ ငွေကြေးပမာဏ မည်မျှရှိမည် ဆိုသည်ကိုလည်း မဆုံးဖြတ် နိုင်သေးကြောင်း သိရသည်။
တရက်လျှင်ခရီးသည်၁သိန်းခန့်ကို၁၅မိုင်အထိ၁၀ကျပ်၊၁၅မိုင်ကျော်လျှင်၂၀ကျပ်ဖြင့် ပို့ဆောင် ပေးနေသည့် ရန်ကုန်မြို့ပတ်ရထားလုပ်ငန်း၏တလ၀င်ငွေမှာကျပ်၄၂ သန်းကျော်သာရှိပြီးအသုံးစရိတ်သန်း၂၆၀ ကျော်ရှိသဖြင့် များစွာ အရှုံးပေါ်လျက် ရှိသည်။
“ကျနော်တို့ကအောင်မြင်တဲ့လုပ်ငန်းတခု၊လူတိုင်းလိုချင်တဲ့လုပ်ငန်းတခုကိုယူရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့် အရှုံးကာမိအောင်ဘူတာကနေတက္ကစီ၊ဘတ်စ်ကားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း၊ဘူတာနယ်မြေအတွင်း စားသောက်ဆိုင်၊ဟိုတယ်စတဲ့ အပိုဝင်ငွေရစေမယ့်လုပ်ငန်းမျိုးနဲ့တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခွင့် ရချင်ပါတယ်”ဟု စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးက ပြောသည်။
တခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် တဦးကလည်း မြို့ပတ်ရထားကို ပုဂ္ဂလိက စလုပ်သည့် ၄၊ ၅ နှစ်တွင် အရှုံးပေါ်နိုင်ကြောင်း၊နှစ်ကြာလာလျှင် မြတ်လာမယ် ထင်ကြောင်း၊ ခရီးသည်လည်း မထိခိုက် လုပ်ငန်းရှင်လည်း အမြတ်ရမည့် ဈေးနှုန်းဖြစ်ရန် လိုကြောင်း ပြောသည်။
“အခုရထားခက၁၀၊၂၀ကျပ်ကနေခင်ဗျားတို့မကိုက်ရင်ဘယ်လောက်တိုးယူမလဲစဉ်းစားထားပါ။ ၇၀ကျပ်ဆို ကိုက် မလား၊ ၁၀၀ ကိုက်မလား စသဖြင့်ပေါ့။ ခင်ဗျားတို့ အဆင်ပြေနိုင်မယ့် ဈေးနှုန်းကိုပဲ အဆိုပြုပါ” ဟု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဆိုသည်။
ဆက်လက်၍ ၎င်းက အဝေးပြေးရထားခအား ၁ မိုင် အတွက် ၄ ကျပ်ယူထားကြောင်း၊ နေပြည်တော် - ရန်ကုန်ခရီးကို ကျပ် ၉၀၀ သာ ရှိကြောင်း ဆက်ပြောသည်။
“ဘူတာကနေအိမ်ကိုတက္ကစီငှားခ၃ထောင်၊၄ထောင် တောင် မမြင်ကြတာ၊ ရထားခ နည်းနည်းတက်တာကို မြင်ကြဖို့မကောင်းပါဘူး” ဟု ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်းက ဆိုသည်။
မြို့ပတ်ရထားအား ပုဂ္ဂလိကပေးလိုက်ပါက အစိုးရပိုင်ထက် ၀န်ဆောင်မှုပိုကောင်းလာမည်ဟု ထင်ကြောင်း၊ ယခု လက်ရှိတွင် မြို့ပတ် ရထားများ တနေကုန်ထွက်မလာသည့် နေ့များ ရှိကြောင်း ရန်ကုန် ကြည့်မြင့်တိုင် မြို့နယ်မှ ဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
မြို့ပတ်ရထားပုဂ္ဂလိကပိုင်ပြုရေးနှင့်ပတ်သတ်၍၂ပတ်မှ၁ လအတွင်း အစည်းအဝေး ထပ်မံပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန် မြို့ပတ်ရထားလမ်းသည် မိုင် ၇၀ ခန့် ရှည်လျားပြီး နေ့စဉ်ခေါက်ရေ ၂၀၀ ကို ၅ မိနစ်ခြား ပြေးဆွဲနေကာ အဆိုပါ လုပ်ငန်းတွင် ဘူတာနှင့် ရပ်စခန်း ၇၇ ခု၊ ရထား ခေါင်းတွဲ ၂၅ တွဲ၊ လူစီးတွဲ ၉၀ တို့ ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၆ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၁၉ နာရီ ၁၀ မိနစ် .
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန။ ။သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်သူ ဦးရဲတင့်သည်နေအိမ်တွင်
ချော်လဲခဲ့သောဒဏ်ရာကြောင့်ဦးနှောက်တွင်းသွေးခဲကာရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဦးနှောက်နှင့် အာရုံကြောဌာနတွင် တက်ရောက် ကုသမှု ခံယူနေရသည်။
အသက်၆၉နှစ်ရှိ ဦးရဲတင့်သည်အကြံပေးအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီးနေပြည်တော်တွင်သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့် တွေ့ဆုံအပြီးပြန်လာချိန်တွင်နေအိမ်တွင်းလှေကားမှပြုတ်ကျကာဦးခေါင်းတွင်ပြင်းထန်သည့် ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ယခုအခါရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဌာနတွင်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူပြီးဖြစ်ကာကျန်းမာရေးမှာ အတော်ပင် ကောင်းမွန်လာခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။
“သမ္မတအကြံပေးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးသိရတဲ့နောက်မှာသမီးနေထိုင်နေတဲ့သြစတြေးလျကနေပြန်လာခဲ့တယ်နေပြည်တော်အစည်းအဝေးကိုဦးနေဇင်လတ်၊ ဦးကိုကိုလှိုင်တို့နဲ့ အတူ တကြိမ်သွားဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီက ပြန်အလာမှာ နေအိမ် လှေကားပေါ်ကနေ ပြုတ်ကျပြီး
ခေါင်းမှာ သွေးခဲသွားတယ်။ အဲဒီကစပြီး နောက်ပိုင်းနေပြည်တော် အစည်းအဝေးလည်း မသွားဖြစ်တော့ဘူး ကျန်းမာရေးကြောင့် နားနေရတယ်” ဟု သူ၏ မိသားစုဝင်များနှင့် နီးစပ်သူတဦးက မဇ္ဈိမသို့ ပြောသည်။
ဆေးရုံတွင် မျက်မြင် တွေ့ခဲ့ရသူတဦးကဦးရဲတင့်ကျန်းမာရေးမှာ“၉ဝရာခိုင်နှုန်းကောင်းနေပါပြီ”ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါကုသမှုအားနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသို့ဦးရဲတင့်မှ အကြောင်းကြားခြင်း မပြုလုပ်ခဲ့သဖြင့် အထူးရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲအရာရှိများက ဆေးရုံရှိ ဆရာဝန်၊သူနာပြုများထံမှ လူနာမှတ်တမ်းအား လာရောက်ယူငင်ကြောင်း အဆိုပါ ဆေးရုံမှ သူနာပြုတဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
“ဦးရဲတင့်ရဲ့ဖိုင်တွေကိုလာတောင်းကြည့်တယ်ကာယကံရှင်မိသားစုရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရသေးတော့ကျမ တို့လည်းမပြနိုင်ဘူးလို့ပြောပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်သူတို့လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို ရအောင်ယူသွားပါတယ်။ကာယကံရှင်နဲ့တော့တွေ့မသွားရဘူး”ဟုဆေးရုံမှသူနာပြု ဆရာမတဦးက ဆိုသည်။
ဦးရဲတင့်သည်ကြေးမုံသတင်းစာအယ်ဒီတာချုပ်ဟောင်းတဦးဖြစ်ပြီးလက်ရှိတတွင်ဘာသာပြန် စာအုပ်များရေးသားလျက်ရှိကာမကြာသေးမီကအမျိုးသားစာပေဘာသာပြန်ဆုကိုသွေးနှင့် ရေနံ စာအုပ်ဖြင့် ရရှိခဲ့သည်။
သမ္မတအကြံပေးအဖွဲ့ကို နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေးနှင့် ဥပဒေအကြံပေးအဖွဲ့ဟူ၍ သုံးဦးစီဖြင့် သုံးဖွဲ့ဖွဲ့ထားပြီး နိုင်ငံရေး အဖွဲ့တွင် ဦးကိုကိုလှိုင်၊ ဦးနေဇင်လတ်နှင့် ဦးရဲတင့်တို့ ပါဝင်သည်။
Posted by justfreeman at 15:480comments
Posted by justfreeman at 04:000comments
ဧရာဝတီ Friday, 22 July 2011 17:53
.မြန်မာနိုင်ငံတွင်အတိုက်အခံများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများ လွှတ်ပေးခြင်းမရှိလျှင်နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်း၏ယုံကြည်မှုဆုံးရှုံးနေမည်ဟုအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဟီလာရီ ကလင်တန်က ယနေ့ ပြောကြားလိုက်သည်။
“ကျမတို့အလေးအနက်ထားတာကအကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာဆိုးဆိုးရွားရွားခံစားနေရတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၂၀၀၀ကျော်ကိုခြွင်းချက်မရှိအစိုးရကလွှတ်ပေးဖို့ပဲ”ဟုဟီလာရီကလင်တန်ကအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဘာလီကျွန်းတွင် ကျင်းပသော အာဆီယံ-အမေရိကန် ဝန်ကြီးများအဆင့် ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြောကြားသည်။
ဟီလာရီကလင်တန်ကစစ်လက်နက်ထိမ်းချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မှုမြင့်မားလာကြောင်းလည်း မိန့်ခွန်းတွင် ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
ယမန်နှစ်ကဒုံးကျည်ထိပ်ဖူးများ၊စစ်လက်နက်ခဲယမ်းများတင်ဆောင်လာသည်ဟုယူဆရသည့် မြောက်ကိုးရီးယားသင်္ဘောမြန်မာနိုင်ငံသို့ဦးတည်ခုတ်မောင်းလာသည်ကိုတားဆီးခဲ့သည်ဟုအမေရိကန် အရာရှိများက ပြောသည်။
အဆိုပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍မြန်မာနိုင်ငံကအနုမြူလက်နက်ပိုင်ဆိုင်လိုသည့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိသည်ဟု စိုးရိမ်ဖွယ်များ တိုးလာစေခဲ့သည်။
နျူကလီးယားမပြန့်ပွားရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခြင်းခံနေရသည့်မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုလေးစားလိုက်နာရန်ဟီလာရီကလင်တန်က သတိပေးသည်။
“နိုင်ငံတကာအသိုင်းအ၀ိုင်းရဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့ယုံကြည်မှုပြန်ရဖို့ကိုသူတို့လှမ်းမလား၊ တလျှောက်လုံး သွားနေတဲ့ လမ်းဟောင်းပဲ ဆက်လျှောက်မလား၊ ရွေးချယ်စရာက ရှင်းပါတယ်”ဟု ဟီလာရီ ကလင်တန်က ပြောသည်။
ယမန်နှစ်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပခဲ့ပြီးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှအရပ်သားအစိုးရသို့အာဏာလွှဲပြောင်းခြင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုနေအိမ်အကျယ်ချုပ်မှပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းများရှိသော်လည်း ဟန်ပြပြောင်းလဲခြင်းသာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်မှအာဏာကိုတဖက်လှည့်နှင့်ထိမ်းချုပ်ထားဆဲဟုအများက ယုံကြည်နေကြသည်။
ယခုဆွေးနွေးနေဆဲဖြစ်သည့်မြန်မာကို၂၀၁၄ခုနှစ်အတွက်အာဆီယံအလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌရာထူးပေးရေး မဖြစ်သင့်ကြောင်းကိုလည်း ဟီလာရီ ကလင်တန်က အရိပ်အမြွက် ထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့သည်။
“အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒေသတွင်းမှာဦးဆောင်နိုင်တဲ့နိုင်ငံ၊အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ယုံကြည်မူရှိတဲ့၊ လုပ်နိုင်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံကို ရွေးချယ်နိုင်မယ်လို့ ကျမတို့ ယုံကြည်တယ်” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အမေရိကန်သမ္မတအိုဘားမားအစိုးရသည်မြန်မာနိုင်ငံတွင်အခြေအနေတိုးတက်လာစေရန် ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း သိသာမြင်သာသည့် တိုးတက်ပြောင်းလဲခြင်း မရှိပေ။
ဘာလီကျွန်းဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီဇူလိုင်လ၂၀ရက်နေ့တွင်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကလေးစစ်သားကိစ္စ၊ အဓမ္မ အလုပ်ခိုင်းစေမှု၊မတရားဖမ်းဆီးနှိပ်စက်ထောင်ချခြင်းများ၊စစ်တပ်ကလက်နက်တခုသဖွယ် အမျိုးသမီးများအားမုဒိန်းပြုကျင့်သည့်ကိစ္စများအပါအ၀င်ပြည်သူများ၏အခွင့်အရေးများကိုကျူးလွန် ချိုးဖောက်နေခြင်းများအတွက် အမေရိကန် အောက်လွှတ်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် စီးပွားရေး ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှု သက်တမ်းကို နောက်ထပ် တနှစ်တိုးခဲ့သည်။
Posted by justfreeman at 16:570comments
Posted by justfreeman at 16:470comments
ထွန်းထွန်း သောကြာနေ့၊ ဇူလိုင်လ ၂၂ ရက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ၂၀ နာရီ ၀၆ မိနစ် .
နယူးဒေလီ(မဇ္ဈိမ)။ ။မြန်မာအစိုးရသစ်က ကချင်နှင့်တိုင်းပြည်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းရင်းသားဒေသများ၌ထိုးစစ် ဆင်နေသဖြင့်အိန္ဒိယအစိုးရအနေနှင့်စစ်လက်နက်မကူညီရန်အိန္ဒိယရှိလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူများက တောင်းဆိုလိုက်သည်။
မြို့တော်နယူးဒေလီရှိဂျန်တားမန်တားအရပ်၌သောကြာနေ့ နေ့လယ်ပိုင်းတွင်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုရာအိန္ဒိယ လူမှုအဖွဲ့အစည်း၄၆ဖွဲ့၊တသီးပုဂ္ဂလ၄၉ဦးနှင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှု၂၄ဖွဲ့အပါအဝင်လူဦးရေ၁ဝဝကျော် ပါဝင်ခဲ့သည်။
“အိန္ဒိယအစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကိုစစ်လက်နက်ထောက်ပံ့တာကို ကျမတို့ မလိုချင်ဘူး။ဘာ့လို့လဲဆိုတော့
ဒါကအပြစ်မဲ့တဲ့သူတွေကိုသတ်နေတာ။ဒါကြောင့်မလိုချင်တာ။ဒါကလည်းကျမတုိ့အိန္ဒိယအစိုးရကိုပေးချင် တဲ့သတင်းစကားပါပဲ”ဟုဆန္ဒပြပွဲကိုဦးဆောင်စီစဉ်ခဲ့သည့်BurmaCentre(Delhi)မှဆက်သွယ် ညှိနှိုင်းရေးမှူး မစ္စစ် Alana Golmei က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အိန္ဒိယအစိုးရက စစ်လက်နက် ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့် ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်ခြင်းသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား
ဒေသများတွင် စနစ်တကျ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အားပေးအားမြှောက် ဖြစ်နေသည်ကို မလိုလားကြောင်း စုပေါင်းကြေညာချက်တွင် ရေးသားထားသည်။
ထို့အပြင်နိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၊သတင်းထောက်များနှင့်ပြည်သူများအပေါ်လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက် မှုနှင့် ထိုးစစ်ဆင်မှုများ ပြုလုပ်နေသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
“သူတို့(အိန္ဒိယ)အမျိုးသားအကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးနဲ့ရရှိရေးအတွက်အုပ်ချုပ်နေတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ လိုချင်တာတွေပေး၊ဝယ်ချင်တာတွေရောင်းမယ့်အနေအထား။နောက်တခါဆိုးတာကတော့နိုင်ငံတကာ စင်မြင့်မှာမြန်မာအုပ်ချုပ်သူများအလွန်လိုချင်နေတဲ့နိုင်ငံရေးအရကာကွယ်မှု၊သံတမန်ရေးအရ ကာကွယ်မှု တွေကိုအိန္ဒိယအစိုးရကတောက်လျှောက်လုပ်လာတော့ဒါလည်းပဲဆက်လုပ်နေမယ်လို့ကျနော်က ထင်တယ်”ဟုNCGUB ညွန့်ပေါင်းအစိုးရ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဒေါက်တာတင့်ဆွေက မဇ္ဈိမကို ပြောဆိုသည်။
အိန္ဒိယဘက်မှစစ်လက်နက်များတင်ဆောင်ထားသည့်မြန်မာစစ်ကား၅၂စီးဇူလိုင်၇ရက်တွင် မြန်မာပြည်တွင်းဝင်ရောက်ခဲ့သည့်အပေါ်ယနေ့ဆန္ဒပြပွဲကကန့်ကွက်ခဲ့သေးသည်။မဏိပူရပြည်နယ် မိုးရေးမြို့မှ စစ်ကိုင်းတိုင်း တမူးမြို့မှတဆင့် ဝင်ရောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
“ကျမတို့အနေနဲ့အိန္ဒိယဘက်ကနေမြန်မာဘက်ကိုစစ်ကား၅၂စီးပို့ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုပဲသိရတယ်။ အသေးစိတ် မသိရသေးဘူး။ကျမတို့ဒီသတင်းတွေကိုနယ်စပ်မှာရှိတဲ့သတင်းအေဂျင်စီတွေကနေရတာပါ။ အခုကိစ္စကတော့ ကျမတို့ ဆန္ဒပြတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ ကိစ္စရပ်တခုပါ။ ဒါက အိန္ဒိယက မြန်မာနိုင်ငံကို စစ်လက်နက် ထောက်ပံ့နေတဲ့အထဲက အစိတ်အပိုင်းတခုပါ” ဟု မစ္စစ် Alana Golmei က ပြောသည်။
အဆိုပါ စစ်ကား ၅၂ စီးကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မဇ္ဈိမကလည်း သီးခြားအတည်ပြုနိုင်ခြင်း မရှိသေးပေ။
နယူးဒေလီ ဂျန်တားမန်တား အရပ်တွင် ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေသူများ (ဓါတ်ပုံ BCD)
“အိန္ဒိယကဒီလိုအချိန်မျိုးမှာပေါ့လေ။လက်နက်ပစ္စည်းတွေ မြန်မာပြည်ပို့တယ်ဆိုတဲ့ သတင်းက မှန်ခဲ့လို့ရှိရင်
တော့ဒီဟာဟာမဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စဖြစ်တယ်။ အချိန်ရွေးမှုလည်း အင်မတန်မှ လွဲမှားတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆို
တော့ သိတဲ့အတိုင်း မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ တိုက်ပွဲတွေက အနည်းဆုံး ပြည်နယ် ၃ ခုမှာတောင် ဖြစ်နေတဲ့ အချိန်မှာ လက်နက်တွေ ပေးတယ်ဆိုတော့ ဒါဟာ မှားယွင်းတဲ့ အချိန်ရွေးချယ်မှု” ဟု ဒေါက်တာတင့်ဆွေက ဆိုသည်။
အိန္ဒိယအနေဖြင့်၎င်းတို့အကျိုးစီးပွားအတွက်လက်နက်နှင့်ချဉ်းကပ်ခြင်းမှာမှားယွင်းကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးဒီမိုကရေစီနှင့်အကြမ်းမဖက်မှုကိုင်စွဲခဲ့ခြင်း၊ဗုဒ္ဓဘာသာ ထွန်းကားရာ ဒေသဖြစ်သည့်အတွက် နဂိုရှိရင်းစွဲ အရည်အချင်းများနှင့်သာ ချဉ်းကပ်သင့်သည်ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
“လက်နက်ရောင်းတာကတော့ဘယ်နေရာရောင်းရောင်းရတယ်။ခုနပြောတဲ့အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဘာသာရေး အဆုံးအမတွေကို တခြားနိုင်ငံတွေ လုပ်မရဘူး။ ဆိုလိုချင်တာက အိန္ဒိယဟာသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေး
တွေကိုသုံးပြီးတော့ နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး၊သူ့အကျိုးစီးပွား ဖြည့်ဆည်းအောင် လုပ်သင့်တယ်လို့ ယူဆပါ
တယ်” ဟု သူက ဆိုသည်။
မြန်မာ့မြေပေါ်တွင်အခြေချလှုပ်ရှားနေသည့်အိန္ဒိယအရှေ့မြောက်ပြည်နယ်ခွဲထွက်ရေးသူပုန်များအား နှိမ်နင်းရန်အတွက်အိန္ဒိယအစိုးရကမြန်မာစစ်အစိုးရကိုလက်နက်များဈေးပေါပေါနှင့်ယခင်က ထုတ်ရောင်းခဲ့စဉ် ကလည်းမြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူများက ကန့်ကွက်ခဲ့ကြသေးသည်။ သို့သော် ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်မတ်လထဲတွင်အိန္ဒိယနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးပရာနတ်ဘ်မူကာဂျီးက၎င်းတို့အစိုးရအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံကိုလက်နက်ထောက်ပံ့ခဲ့သည်မှာမဟုတ်မှန်ကြောင်းအမေရိကန်ဝါရှင်မြို့တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ဆွီဒင်နိုင်ငံStockholmအပြည်ပြည်ဆိ်ုင်ရာဌာန-SIPRI မှသုတေသနပညာရှင် SiemonWezeman
အဆိုအရ၂ဝဝ၆အောက်တိုဘာလထဲတွင်၇၅နှင့်၁ဝ၅မီလီမီတာသေနတ်များတင်ပို့ခဲ့ပြီး T-55 တင့်ကားများ၊ သံချပ်ကာကားများ၊ မော်တော်ကားများနှင့် ရဟတ်ယာဉ်များလည်း ပို့ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဝီကီလိခ်ကြေးနန်း များတွင်ဖော်ပြပါရှိသော်လည်း သီးခြား အတည်ပြုချက် မရရှိသေးပေ။
ယင်းအပြင်၂ဝ၁ဝနှစ်ကုန်ပိုင်းက အိန္ဒိယ-မြန်မာ သဘောတူညီချက်တွင် ရိုင်ဖယ်သေနတ်များ၊ သံချပ်ကာ
ကားများနှင့်ကင်းလှည့်လေယာဉ်များထောက်ပံ့ရန်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြေင်းမစ္စတာWezemanက ဝီကီလိခ်တွင် ပြောကြားထားသည်။
ယနေ့ဆန္ဒပြပွဲအပြီးတွင်အိန္ဒိယအဖွဲ့များနှင့်မြန်မာ့အရေး လှုပ်ရှားသူများက လက်မှတ်ရေးထိုး ကန့်ကွက်လွှာ ၂ စောင်အား ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာမန်မိုဟန်ဆင်းထံ ပေးပို့ခဲ့ကြသည်။